‘स्वास्थ्य बीमाको बास्तविकता बुझेरै सरकारले तीन बर्षे अवधी तोकेको हो’ – Nepali Health
२०७७ जेठ १९ गते १०:५६ मा प्रकाशित
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रमेशकुमार पोखरेल नियुक्त भएको डेढ बर्ष पुगेको छ । यो अवधीमा उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा के कस्ता कार्यहरु अघि बढाए ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले कुन अवस्थामा छ ? कोरोना भाइरसको महामारीले यो कार्यक्रमलाई कत्तिको असर गरेको छ ? नेपाली हेल्थका सम्पादक रामप्रसाद न्यौपानेले कार्यकारी निर्देशक पोखरेलसंग यी विविध विषयमा केन्द्रीत गरि कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप :